ZvakaipaGnome, nyowani uye zvisingawanzo malware zvinokanganisa Linux | Linux Vakapindwa muropa
Makore mazhinji apfuura, chipangamazano wangu muLinux akandikoka kuti ndichinje kune iyo penguin system uye pakati pezvaakataura paive ne "muLinux hamuna mavairasi." Izvo zvaive zvisiri kana ichokwadi; Chii chiri chechokwadi ndechekuti, sezvo iri yakachengeteka zvakanyanya uye ichishandiswa nevashoma vashoma (pakombuta), isu hatisi ivo vanonyanya kurohwa nematsotsi e-cyber. Asi kunyangwe kusasimba kana kuve "diki" chinangwa hakutivimbise kuva nechokwadi che 100%, chimwe chinhu chakaratidzirwa zvakare mushure mekuwanikwa kwe ZvakaipaGnome.
Chinhu chekutanga kuchengeta mupfungwa ndechekuti iyo "Gnome" chikamu chinoonekwa muzita ravakabhabhatidza ichi hutachiona hune hukama nenzvimbo inozivikanwa yemifananidzo yeLinux, asi izvo hazvireve kuti zvinokanganisa mashoma masisitimu anoshanda. Zvakanakisisa pane zvese, chakafukunura, Intezer (pano chinyorwa chake pane malware) chakawana software yakaipa iyo ichiri mumatanho ekutanga ebudiriro, kunyange hazvo yaisanganisira njodzi dzinoverengeka muchimiro chemidziyo yekushora vashandisi.
1 EvilGnome, hutachiona hweLinux isingawanzo
2 Iyo malware ine zvikamu zvishanu
EvilGnome, hutachiona hweLinux isingawanzo
ZvakaipaGnome haina kutaridzika semavhairasi mazhinji akawanikwa kuLinux. Zvave zvakaoma kuti uzviwane, asi kamwechete mukutarisa zvave kuzivikanwa kuti yakagadzirirwa kutora mhando dzese dzedata kubva kumacomputer edu, senge desktop screenshots, kuba mafaira, kurekodha odhiyo kana kunyange kurodha nekuita mamwe ma module akaipa, tese tisina kuona zviri kuitika.
Zita rayo rinouya nekuti rinoedza kuteedzera kuwedzerwa kwe GNOME, iyo graphical nharaunda. Inoturwa seyakagadzirwa script anozviita, diki Shell script inogadzira yakadzvanywa uye inozviburitsa yega TAR dura kubva kudesktop. Inochengetwa muhurongwa hwekushandisa uchishandisa crontab uye inotumira data kusevha iri kure ndeyairwiswa
Kutsungirira kunowanikwa nekunyoresa gnome-shell-ext.sh kumhanya maminetsi ese mu crontab. Chekupedzisira, iyo script inomhanya gnome-shell-ext.sh, inova iyo inotangisa iyo hombe gnome-shell-ext inoitiswa.
Iyo malware ine zvikamu zvishanu
EvilGnome inoumbwa nema module mashanu, ese ari akaipa:
ShooterSound shandisa PulseAudio kurekodha odhiyo kubva maikorofoni.
ShooterImage shandisa Cairo kutora skrini.
ShooterFile shandisa runyorwa rwe mafirita kuongorora mafaera.
ShooterPing inogamuchira mirairo mitsva kubva kure server.
Shooter Key iyo keylogger.
Iwo mashanu ma module pamusoro achatumira / kugamuchira iyo data kuenda / kubva kune anorwisa server.
Kuti utarise kana isu takabatwa, isu tinofanirwa kutsvaga iyo inoitisa faira "gnome-shel-ext" munzira ~ / .cache / gnome-software / gnome-shell-extensions. Sezvandambotaura, iyo EvilGnome inogamuchira zita rayo kubva kuGNOME Desktop uye inonyepedzera sekuwedzera kwenzvimbo yemifananidzo hazvireve kuti, semuenzaniso, vashandisi vePlasma vakachengeteka, kunyanya kana tichifanira kuyedza yakawanda software. Iyi malware inogona kuzviisa pachayo munzira yakataurwa.
Kune rimwe divi uye senguva dzose, zvinokurudzirwa kuchengetedza software kuti ivandudzwe uye kurodha pasi software chete kubva kunzvimbo dzepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EvilGnome, nyowani uye isingawanzo malware inobata Linux, kana iwe uchifunga kuti wakachengeteka
Kana tikatanga kusaziva musiyano uripo pakati pemavhairasi, Trojans uye rootkits ... isu tave kuenda kune yakaipa kutanga. Kana tikadzika kune zvakajairika kuti "vashoma vanoishandisa, kune mavhairasi mashoma." Hupenzi chaihwo hunodzivirirwa nemapenzi vanhu vanodzokorora mantra yavakambonzwa. Nhema dzinodzokororwa zana zana dzinouya kuzotorwa pachokwadi. GNU Linux haina kuchengetedzeka nekuti vashoma vanoishandisa, GNU Linux yakachengeteka zvakanyanya nekuti ine mvumo system inoita kuti ive yakachengeteka kupfuura mamwe masisitimu anoshanda. Linux yakaberekerwa kuve yakawanda-mushandisi sisitimu uye yakagadziridzwa pane ino fomati. Kusiyana nemawindows, semuenzaniso, iyo yakagadzirwa nekutsikirira kuti ive imwechete-mushandisi system uye pane iyi hwaro uye yakaremerwa nekudzokera kumashure kuenderana kwachinja nenzira yainayo. Dhizaini matambudziko anokambaira nekufamba kwenguva. Mumawindows akawanda masisitimu maitiro anomhanya nezvakajairika mvumo yemushandisi, kusiyana ne linux uko kumhanya nemaitiro aya iwe unoda midzi mvumo. Hapana sisitimu isingakundike, asi mamwe akachengeteka kupfuura mamwe nekugadzirwa. Munyika umo maseva mazhinji eInternet anomhanya paLinux, zvingave zvine musoro kurwisa iwo maseva sezvo mamirioni emakomputa achibatana kwavari neimwe nzira kana imwe. Kana iwe ukaisa chepfu mudziva rinonwa mvura boka, unozoisira chepfu boka rose. Kana zvichinetsa kurwisa iwo maseva echimwe chinhu chichava uye hazvisi nekuti izvo zvishoma zvinoshandiswa. Mazhinji ari GNU Linux.
Mhoro, Macana. Handina kumbotaura kuti "yakachengeteka nekuti tinoishandisa zvishoma", kana zvisiri "nekuti yakachengeteka Uye tinoishandisa vashoma kwazvo" izvo zvakasiyana zvakanyanya. Vagadziri veVirusi vanotarisa pazvinangwa zviri nyore uye imwe inoshandiswa nevanhu vazhinji. Vagadziri veVirusi havawanzopedza nguva vachigadzira hutachiona hweLinux nekuti yakachengeteka zvakanyanya uye inoshandiswa nevanhu vashoma kwazvo. Uye kugona, hongu iwe unogona, asi hazvina kukosha. Kana Windows iri panjodzi uye vanhu vazhinji vachishandisa, zvine musoro chinhu kuvandudza iwo maWindows. Kunyangwe dai Windows yainge yakachengeteka zvakanyanya, ndinofunga vaizoenderera mberi nekutarisa pane inoenderana 90% yemugove wemusika.
Kwete. Vagadziri veVirusi vanoisa pfungwa pachirongwa chiri nyore kurwisa, senge vanokwira svondo vanoisa pfungwa pakukwira Everest kwete K2. Vagadziri vehutachiona vane yakawanda nguva yekuparadza sekureba sezvavanogona kusarudza kuzadzisa chinangwa. Hapana anovabhadhara uye hapana anovadzora. Ivo havafanirwe kugara mukati kana kunze. Kurwisa maseva eLinux eBank X kunozviwanira iwo mari yakawanda, kana ikabudirira, pane kurwisa 1000 maPC PC evashandisi vavo. Saka wadii kurwisa sevha yebhangi uye kurwisa maPC evashandisi? Nekuti zvinonyanya kuoma kurwisa sevha kunyangwe iwe uine yayo sosi kodhi mukutarisa. Dhizaini dhizaini. Mota yeFormula 1 haina kuchengetedzeka pane yekushandisa mota nekuti vashoma vanoishandisa. Iyo yakachengeteka nekuti yakagadzirirwa kuti ive yakachengeteka. Dhizaini dhizaini. Kunyangwe iri mumaoko evasingazive inogona kunge isina kuchengetedzeka kunge mota yeChinese. Kana iwe uchida kushandura kuita Windows zvakanyanya kuchengetedzeka, iwe unofanirwa kungo siya kumashure kuenderana uye nyorazve iyo system kubva pakutanga, kumisikidza yakaoma mushandisi account account (sezvinoita Linux). Chero bedzi iwe usingaite, inoramba ichingove yekudonha nekuti zvese zvaunoita kuita chigamba uye chigamba kusvika kusingaperi. Uye kuenderera mberi nemusoro wenyaya, upenzi kusashandisa system yakachengeteka kupfuura imwe, zvisinei nezvaunofunga kuti zvakachengeteka. Nekuti isu tiri kutaura nezve chengetedzo uye kwete nezve vangani vanoishandisa kana kurega kuishandisa. Nekuti zvisinei nekuti chii, Linux yakachengeteka kupfuura Windows, parizvino? Kana saka nei usingashandisi? Nekuti patatin…. nekuti mbatatisi…. hazvina basa. Vachawana chiuru nechimwe zvikonzero zvekusashandisa. Kana pasina anoishandisa, kana vasingade mapenguin, kana vachida Batman… Mune zvepfungwa tinodaidza izvi dissonance yekuziva.
Ini ndakasangana nevabati uye ivo vanorwisa / vanoshanda zvinoita kuti vawane mari. Kana ivo "vakarwisa" mabhangi, ini handizopa ruzivo, asi ndinoziva nezveumwe asina kushanda uye "akatora" mari yake kumabhangi. Asi isu hatisi kutaura nezve mavhairasi / malware, asi nezve kubiridzira. Software yakaipa inofanira kushanda zvoga uye inofanira kupararira. Ndokureva kuti: kurwiswa kunovaitira kuchinhu chakakosha chinogona kuvapa mari; otomatiki inowedzerwa zvinoenderana nesisitimu yemushandisi. Android "iri" Linux, inoshandiswa ne + 80% yevashandisi vese vari munyika uye ndeipi nhare inoshanda yavanorwisa?
John Gimenez akadaro
Kufungidzira kwakawanda uye looooong blablabla yakavakirwa panzira yako wega yekuona zvinhu. Pa kiromita iwe unogona kuona kuti hauna kumbobvira washandira chimwe chinhu chakakomba kunge bhangi kana nzvimbo dzematare ehurumende. Dai iwe waiziva kuti chete isingasviki makumi matatu muzana ezvinetso zvakawanikwa zvakaunganidzwa uye zvinosvika pamapeji akadai, haungafambe famba senge chipangamazano -makomputa guru-ego + 30 uchitsanangura izvo zvakapusa izvo zvaunotaura nenzira yekuzvitutumadza izvo zvinobuda.
Hahaha Saka unoziva matsotsi uye usamhan'ara kuvakuru? Pamwe iwe uri mubatsiri wake kana iwe unotaura nezvako mumunhu wechitatu…. hahaha chenjera nezvaunotaura ... kana mumwe munhu achinyatsokuona sababa-ndinoreurura uye ndokuudza zvikonzero zvake nei achifanira kunge ari mutirongo xD
Pindura Juan Gimenez
Mhoro John. Handirambe ndichitaurirana nemunhu iyeye. Ndakasangana naye kuburikidza neshamwari yeshamwari, wandakazoita shamwari naye, uye akauya kuzondipa zvinhu, asi ndakafunga nezvazvo, handina kuzosvika padhuze naye uye ndakazopedzisira ndavekubva kure neimwe. Iwe unoona, ini ndaisa "Ndinoziva", kwete "Ndinoziva." Ini ndaiziva zvakakwana kuziva kuti ini ndaisada kuve padhuze neaya marudzi evanhu. Uye zvakare kuziva kuti "yakashanda sei."
Nezve kumhan'ara, ndinofunga wakarurama, asi icho chinhu chausingafunge panguva iyoyo, uye zvishoma kana iwe uchifunga nezve izvo zvingangobatanidzwa.
Mavirusi eLinux anofanirwa kuiswa nemushandisi zvakanyanya. Kunyangwe iine njodzi, zvinonetsa kune mushandisi-nzvimbo yakaipa chirongwa kukwirisa ropafadzo zvakasununguka. Sezvavanotaura pamusoro pesisitimu yemvumo.
Iwo matambudziko ndevashandisi vasina kudzidza zvine hunyanzvi neWindows masystem (mairi zvakajairika kutsvaga software muGoogle uye pirate proprietary software).
Kunyangwe matombo achiwirawo mukati memharaunda kubva kuruoko rweUbuntu neMS vanoda vanounza postmodernism kune masisitimu nekuyedza kweesoftware yekuisa masystem (kana kuti zvainetsa kusarudza chirongwa kubva kune repository ine software iyo isingatomboratidza mapakeji akafanana izvo zvinosanganisirwa muDebian kana Fedora neGUI yavo inosanganisirwa). Kana kunyangwe nehupenzi hwevadi ... izvo zvisiri chinhu asi mikana yakavhurika yekurwiswa neinjiniya yemagariro, uko software yakaipa kana nenjodzi dzinogona kunyengedza mushandisi uye kukumbira iyo password password kuti iwedzere mikana.
Hazvina musoro kuti MS system inowanzo fananidzwa nemazana eGNU / Linux kugovera muhomwe imwechete. Asi zvakatonyanya iko kushushikana kwekuisa nharaunda inogona kugadzirisa zvakakomba zviputi mumaawa padanho rakafanana nesystem (Windows) iyo inogona kutapukirwa ne rootkit neicho chokwadi chekubatanidzwa neinternet.
Kukanganisa mune gnome hakuna kufanana nekusagadzikana muLinux, anodikanwa matipipi
Pindura kuna caranabo
Zvakanaka tarisa akadaro
Ivo vari kutaura nezve GNU / Linux Caranabo. Linux inzira.